आयरल्यान्डबिरुद्दको दोस्रो तथा अन्तिम टि-२० खेलमा भारत १४३ रनको भारी अन्तरले बिजयी भएको छ। - Hamro Nepal Cricket
आयरल्यान्डबिरुद्दको दोस्रो तथा अन्तिम टि-२० खेलमा भारत १४३ रनको भारी अन्तरले बिजयी भएको छ।
भारतको उत्कृष्ट प्रदर्शन , आयरल्यान्ड ७० रनमा अल आउट
टस जितेर वलिङ्ग गर्ने निर्णय गरेको आयरल्यान्डले २१४ रनको लक्ष्य पाएको थियो। कोहली र के.एल राहुलले भारतिय पारिको सुरुवात गरेका थिए। कोहली सस्तैमा चेजको जालमा पर्न पुगे भने , के.एल राहुलले ७० रनको उत्कृष्ट पारी खेले।
कप्तान कोहली पबिलियन फर्किएपछी कृजमा आएका सुरेस रैनाले पनि ६९ रनको उत्कृष्ट योगदान गरे। राहुलले आफ्नो पारिमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए। पहिलो खेलमा उत्कृष्ट पारी खेलेका रोहित शर्मा भने शून्य रनमै पबिलियन फर्कन पर्यो।
केभिन ओ ब्राइनले एकै ओभरमा राहुल र रोहितलाइ आउट पारे पछि , लयमा फर्किएको आयरल्यान्डले बिशाल लक्ष्य पाउनबाट आफुलाइ टार्न सकेन। सुरेश को सम्हालिएको इन्निङ र हार्दिकको उत्कृष्ट पारिले भारतलाइ विशाल लक्ष्य सम्म पुर्याउन मद्दत गरे। पान्ड्याले ९ बलको सामना गर्दै ३२ रन बनाएका थिए ।
विशाल लक्ष्य पिछा गरेको आयर्ल्यान्ड भने ७० रनमै अल आउट हुन पुग्यो। भारतका लागि कुल्दिप र युज्बेन्द्रले ३-३ विकेट चट्काएका थिए।
यश खेलमा भारत १४३ रनले बिजयी हुन पुग्यो।
Nepal to play four practice matches before historical triangular series at Lords
भोलि १५ सदस्यीय नेपाली टोलि युरोप जाँदै !
निर्णायक खेलमा भारतलाइ ८ विकेटको हार चखाउदै इङ्ग्ल्यान्डले हात पार्यो एकदिबसिय शृङ्खला
आयरल्यान्डका उत्कृष्ट खेलाडी केभिन ओ ब्राइन एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा आवद्ध हुने
पहिलो टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा भारतले हासिल गर्यो उत्कृष्ट जित! राहुलको श्तक, कुल्दिपले लिए ५ विकेट!
HNC, Kathmandu “Team Nepal marching high” Nepal will be marching towards London by today...
Nepal faced defeat in their last game | Finishes in Eighth Position
HNC,Kathmandu The Netherlands defendedamodest total against Nepal at Kwekwe Sports Club to...
HNC,Kathmandu Nepal 115 for4(Airee 50) beat Papua New Guinea 114 (Airee 4-15,...
Rohit , Sompal stars , as Nepal cruised Hongkong by5wickets | ICC WCQ 2018
HNC, Kathmandu Nepal beat Hongkong to secure fourth position. Babar Hayat , Captain of...
Day3: As it all Went | ICC WCQ18
HNC, Kathmandu HONG KONG COME TO THE PARTY It’s hotting up in Group B,...